Momba anay - Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd.
Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpitarika ny mpanamboatra Cap Seal Liners any Shina, natsangana tamin'ny taona 1990, manampahaizana manokana amin'ny famokarana lozisialy fanamafisam-peo vita amin'ny alimina, valizy fitomboka fitaratra, valin'ny famehezana fanerena, EVA Linam-bolo, EPE lamba misosa. , fametahana valizy famehezana, sns.
Ny vokatray dia misy betsaka amin'ny fametahana fanafody, Sakafo, kosmetika, Lubricant, Pesticides, sns. Miaraka amin'ny fiasa avo lenta amin'ny fisorohana ny famoahana sy ny mando, ny fanoherana ny sandoka ary ny fanitarana ny fotoana fitahirizana vokatra.
Ny orinasanay dia any amin'ny 601, Laolu Road, Pudong New District, Shanghai. Ny orinasa dia akaikin'ny Seranan-tsambo Yangshan sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pudong. Tena mety ny fitaterana anay.
Izahay dia hisisika hatrany amin'ny fanavaozana, ary hanao orinasa miaraka amin'ireo orinasa ao an-trano sy any ivelany miankina amin'ny fitoviana sy ny tombotsoan'ny tsirairay, manokana ny fanomezana ireo vokatra sy serivisy avo lenta.
Ny orinasanay dia manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny teknolojia famokarana. Miaraka amin'ny fikarohana ara-teknika matihanina sy ny fampandrosoana, ary mivoatra hatrany sy manatsara ny vokatra, ny haavo teknolojika ary ao amin'ny orinasa iray ihany no eo amina toerana voalohany.
Ny fitantanana ny orinasa GMP mifototra amin'ny fenitra, nanangana ivon-toerana famokarana sy fanaraha-maso kalitao izahay, (fanaraha-maso kalitao matihanina, fanaraha-maso kalitao sy fanandramana), ny orinasa dia manana fikajiana ara-batana sy simika, ary ny fakana ny (10,000) Laboratoara ho an'ny akora , fanandramana sy fitsapana vokatra.
Niorina tamin'ny taona 1990, taorian'ny ezaka nandritra ny folo taona mahery, ny orinasanay dia efa manana ny kolontsain'ny orinasa tsy manam-paharoa. Tamin'ny 2006, izahay dia nanova fanovana feno ho zaridaina sahala amin'ny zaridaina, ny faritra maitso 50 isan-jato izao.
Ny klioba natolotry ny orinasa sy ny mpiasa, ny efitrano famakiana, ary ny mpiasa hafa, miala sasatra, fialam-boly, fampitomboana fahalalana ny toerana, ny mpiasa dia manana efitrano fandraisam-peo amin'ny klioba karaoke, efitrano ping-pong, efitrano fanaovana catur ary dominoes. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny mpiasa manatsara ny firaisan-kinan'izy ireo, ny orinasa dia mandrindra fiofanana matihanina tsy tapaka, fahalalana ara-teknika, fifaninanana fahaiza-manao ary hetsika hafa, ny mpiasan'ny orinasa ao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro izay ny fironana farany eo amin'ny indostria ary namoaka ny sangan'izy ireo manokana, ary sns.
Enterprise dia nitombo ny fitomboan'ny kolontsain'ny orinasa, miantehitra amin'ny ezaka iraisana izahay sy ny fanohananareo, ny famonosana Shanghai Purple Link Limited dia hivoatra tsara kokoa!